Software A si sharad qaybaha roulette ee xawaaraha iftiinka!
Roulette Turbo Clicker waa barnaamij qadka internetka ah oo kuu ogolaanaya inaad ku sharraxdo 1 illaa 37 lambar oo ka yar ilbiriqsi.
Asal ahaan waa bot bot oo waa la qaabeyn karaa on software kasta ee casinos online.
Roulette Turbo Clicker: yaa isticmaali kara?
Waxaa isticmaali kara dadka jecel ciyaarta ama kuwa adeegsada farsamooyinka saadaalinta muuqaalka ah (Visual Roulette), maaddaama qaar ka mid ah roulettes-ka tooska ah ee tooska ahi ay kuu oggolaanayaan inaad sharadto xitaa 10-12 ilbidhiqsiyo ka dib kubbadda la tuuro iyo Roulette Turbo Clicker waxaa lama huraan ah in sharad sidoo kale dhammaan 37 lambar oo leh kaliya 1 sekan oo la heli karo kahor xiritaanka sharadyada.
Roulette Turbo Clicker ma ahan hab ciyaar, laakiin waa aalad loo adeegsado in lagu adeegsado hab, sidaa darteed xeelad aasaasi ah ayaa loo baahan yahay.
Waxaan sidoo kale ku xasuusinayaa inaadan ku ciyaarin router-ka software-ka, maxaa yeelay waa macquul in lagu xisaabiyo si ciyaaryahanka uu u lumiyo wax ka badan roulette dhab ah.
Roulette Turbo Clicker: irakibaadda iyo bilowga hore
Roulette Turbo Clicker ma rakibto, marka mar la soo dejiyo (waxaan kugula talinayaa inaad ku sameyso desktop-ka), kaliya furi kaydinta oo dhagsii fulinta si aad u bilowdo barnaamijka.
Roulette Turbo Clicker ficil ahaan waa mid caalami ah waxaana loo isticmaali karaa dhamaan casinos-yada internetka ee jira maxaa yeelay waxay u shaqeysaa sidan oo kale: markii aad furto miiska casino oo aad gasho cinwaanka daaqadda ciyaarta ee aad ku aragto kormeerahaaga, XY qalabka (dhinaca kore ee midig) in, haddii cinwaanka aad gasho uu sifiican u eg yahay (muhiim: ixtiraam weeyn / yar), waxay noqonaysaa cagaar waxayna bilaabaysaa inay muujiso isku-darka X iyo Y ee tilmaamaha jiirka markaad ku wareejiso desktop-kaaga.
Haddii aad rabto inaad isla markiiba aragto sida ay u fududahay in la dejiyo Roulette Turbo Clicker, ka raadi muuqaalka muuqaalka dembiga ► Kanaalka Youtube di ThatsLuck.
Cisku xira licker
cunt Roulette Turbo Clicker Looma baahna in gacanta lagu galo iskudhafyada nambarada rooga, xaqiiqda, kaliya sax shaqada jeegga Daar Spacebar Config oo tus tilmaamaha jiirka bartamaha tirooyinka kala duwan sariirta ciyaarta.
Adoo riixaya furaha booska ee kumbuyuutarka kaliya marka jiirku ku yaal bartamaha lambarka, iskuduwaha ayaa si otomaatig ah loogu galayaa barnaamijka!
Hawlgalku wuxuu qaadanayaa wax ka yar 1 daqiiqo oo markaad gasho dhammaan iskuduwaha waxaad ku badbaadin kartaa iyaga oo leh xulashada Badbaadinta.
Sidan ayaad ku yeelan doontaa kaydinta qaabeynta u gaarka ah miis kasta iyo markii aad beddesho casinos-yada kaliya faylka geli (badhanka) load) inaad diyaar u ahaato inaad ku ciyaarto isla markiiba!
Aynu aragno sida shaashadda barnaamijku u egtahay ka dib markii tusaale ahaan loo qaabeeyo Roulette Turbo Clicker miiska ciyaarta internetka.
Sanduuqa bidix ee kore (Windows Caption Casino) cinwaanka saxda ah ee daaqada ciyaarta waa in la galiyaa, ixtiraamka kiisaska xasaasiga ah, haddii kale miiska lama oga.
Qeybaha kala duwan ee hoose waxaa kujira dhamaan iskuduwaha XY ee nambarada rooga, halka dhanka midigna ay jiraan 2 xulashooyin kale oo aad muhiim u ah.
1. Iskuxid qasabadaha KAhor sharadka: haddii, tusaale ahaan, sabab kasta ha noqotee aad ubaahantahay inaad gujiso batoon kastoon ah ama barta fiidiyowga KA HOR Roulette Turbo Clicker bilow inaad tilmaamto, kaliya gal iskuduwaha dhibicdan / badhanka suurtogalka ah oo calaamadee sanduuqa Kahor Sharad Gujinta.
2.Iskuxid iskuxidhka iskudarshada KADIB: waa isku mid baahida suurto galka ah ee riix KADDAMADKA khamaarka, kiiska tusaale ahaan, barnaamijka khamaarka wuxuu ubaahanyahay kadib gelinta sharadka, waxaa lagama maarmaan ah inaad xaqiijiso adigoo gujinaya xaqiijinta badhanka.
Si aad u gujiso Roulette Turbo Clicker sidoo kale batoonkan dhacdooyinka kadib, iskuduwaha badhan ayaa laga gali doonaa shaashadda xulashada qaraabada ayaa la hubin doonaa.
Tani waa wax badan oo ku saabsan qaabeynta, sida aad u aragtay inay tahay hawl aad u fudud oo kuu oggolaan doonta inaad isku xirto Roulette Turbo Clicker wax software casino online jira!
Muhiim: ilaa Roulette Turbo Clicker wuxuu ogaadaa iskudhafka badhamada shaashaddaada ee laxiriira daaqada ciyaarta casino, waxaad si xor ah ugu wareejin kartaa daaqada casino meelkasta oo aad rabto miiskaaga, laakiin xusuusnow inaadan waligaa u baahneyn inaad dib u dhigto, sida iskuduwaha lambarrada rooga ma sii dheeli doono
Sidaa darteed waxaan kugula talinayaa inaad had iyo jeer isticmaasho cabbirka caadiga ah ee daaqadda ciyaarta marka uu furmayo oo waligaa ha beddelin, sida loogu talagalayXitaa ballaarinta daaqadda shaashadda buuxda waxay ka dhigeysaa mid aan la isticmaali karin Roulette Turbo Clicker.
Haddii ay dhacdo inaad dhibaatooyin la kulanto (jiirku wuu guuraa laakiin ma riixo lambarrada), iskuday inaad hoos u dhigto xawaaraha gujinta.
Si loo yareeyo xawaareykan (kaas oo asal ahaan ah 0 = ugu badnaan), uun gal qiime duurka Mouse Guji Xawaare midig hoose
Marka hore isku day inaad dhigto qiimaha 100, haddii aysan wali sii socon kordhin qiimaha 200, 300, iwm ... qiimaha 1.000 wuxuu u dhigmaa 1 ilbiriqsi, laakiin waxay ka dhigi lahayd qasabyada inay aad u gaabiyaan dhexdooda, qiime u dhexeeya 25 iyo 200 waa inay xalliyaan inta badan dhibaatooyinka qaarkood.
Roulette Turbo Clicker: dhagsii xawaaraha iftiinka!
Marka barnaamijka la dejiyo, waxaad ugu dambeyntii bilaabi kartaa ciyaar, markaa aan aragno noocyada khamaarka otomaatiga ah ee aad sameyn karto.
Khamaarista suurtagalka ah waa kuwo aan la koobi karin, ficil ahaan kaliya dooro inta nambar ee aad rabto inaad sharad dhigto (berrinka) LAMBARADA), dooro jihada nambarada sida loogu dhigay shaashadda shaashadda (saacada / dhanka bidix) iyo imisa cutub oo aad rabto inaad sharad ku dhigto lambar kasta (goob UNITS).
Marka qiyamkan la dejiyo, kaliya dhagsii lambarka roogga aan dooneyno iyo Roulette Turbo Clicker inta hartay samayn doonta!
Tusaale: haddii sida ciyaartaadu tahay ay tahay inaad sharad ku dhigto lambar iyo 5-ta soo socota ee saacadda ku xigta (had iyo jeer sida ku xusan nidaamka qaybaha roulette), ka xulo '6' qeybta NUMBERS, ka dib dooro Clockwise iyo markii aad sharad galeyso, guji lambarka roogga aad xiisaynayso: Roulette Turbo Clicker wuxuu tilmaami doonaa lambarkaas oo lagu daray 5 lambar oo midigta ka mid ah nambarka la riixay qayb ahaan ilbiriqsi, aad u fudud!
Adeegso nambarada nambarada
Haddii aad si deg deg ah u isticmaasho badhanka nambarada kumbuyuutarkaaga kumbuyuutarka ah, waad awood u yeelan kartaa shaqadan adigoo hubinaya ikhtiyaarka Isticmaal Numpad.
Si aad u gasho sharad halkii aad ku riixi lahayd jiirka nambarka rooga, si fudud ugu riix furaha isku xigxiga badhanka Cancun, ka dibna qor nooca Tirada, ugu dambayntiina fure fure Ku qor, oo badanaa ku yaal dhinaca midig ee furaha Delete.
Roulette Turbo Clicker dhigeysa sharadka sida saxda ah haddii aan jiir ku riixnay tiro ka mid ah rooga barnaamijka.
Roulette Turbo Clicker: hada col qalab toos ah!
Codsiga ciyaaryahan hada waan ku mahadsan nahay Roulette Turbo Clicker waxay la imaaneysaa ikhtiyaar cusub Gawaarida Gawaarida.
Ficil ahaan, haddii khamaarka tooska ah ee aad ku ciyaareyso uu u beddelo jihada wareegga ee roulette ama kubad wareeg kasta, hubinta ikhtiyaarka cusub D.Switch sida jaantuska, ka dib sharad kasta barnaamijku wuxuu si otomaatig ah u beddeli doonaa jihada qaybta u tilmaamtay saacadda (saacad u socota) uguna rogaysa (anticlockwise).
Roulette Turbo Clicker: Habka Lacag La'aanta
Maxaa diiradda loo saaray kaliya qaybaha roulette?
Codsiga laba ciyaartoy awgeed, waxaan ka dhigay sii deynta cusub qof walba diyaar 2 war muhiim ah.
Midka koowaad waa ikhtiyaarka 'Sii joog:: haddii Roulette Turbo Clicker waxaa daboolaya tan casino sababtoo ah qaraarkaaga kumbuyuutarka kuma filna inuu ka koobnaado labadaba, adoo hubinaya doorashadan Roulette Turbo Clicker had iyo jeer way sii joogi doontaa daaqadaha kale ee aad furto dusha sare.
Nooca labaad ee uguna muhiimsan waa qaabka cusub Khamaaris Bilaash ah.
Guddigan waxaad ka dooran kartaa lambarrada aad rabto inta badan (oo cagaar isu rogi doona) adigoo riixaya fure Bet gujiyaha ayaa isla markiiba tilmaami doona xulashadaada.
Laakiin intaas maahan, haddii tirada nambarrada aad sharad gasho ay had iyo jeer isku mid yihiin wareeg kasta, waxaad sidoo kale awood u yeelan kartaa ikhtiyaarka Khamaarka SpaceBar.
Waqtigan xaadirka ah, halkii aad ka riixi lahayd jiirka furaha Bet markasta, si aad u sharraxdo waxaad u baahan tahay inaad riixdo (Waxaan kugula talin lahaa, hal mar oo keliya!) Barta kumbuyuutarka ee booska waana taas!
Marka lagu daro inaad awood u leedahay inaad doorato lambarrada aad rabto inaad ku sharraxdo wareejin kasta, waxaad sidoo kale diyaarin kartaa 12 liis oo aad ku isticmaali karto waqtiga saxda ah!
cunt Roulette Turbo Clicker runti waad maamuli kartaa ilaa 12 liis oo nambarro ah si aad sharad ugu gasho, waad u adeegsan kartaa shaqsi ahaan, laakiin sidoo kale isla waqtigaas!
Aan isla markiiba aragno furayaasha ku jira guddigan cusub ee Habka Lacag La'aanta:
Tus / Qari Liisaska: badhan wuxuu muujinayaa ama qarinayaa aragtida 12-ka liis; ficil ahaan, haddii aad isticmaasho liisas dhowr ah oo aad xasuusato lambarka 1 illaa 12 ee ay la xiriiraan, waxaad sidoo kale qarin kartaa liistada oo aad calaamadin kartaa lambarka u dhigma liiska nambarada aad rabto inaad tilmaamto, sidan ayaa software-ka qaado meel yar oo ka mid ah desktop-ka.
Liisaska Reload: badhan ayaa dib u cusbooneysiinaya / cusbooneysiinaya dhammaan liisaska. Muhiim: waa in la cadaadiyaa mar kasta oo aad wax ka beddelayso liiska oo aad kaydiso, maxaa yeelay waa in had iyo jeer dib loogu soo celiyaa xusuusta. Intaa waxaa sii dheer, markasta oo aad bilowdo barnaamijka liisaska waa in had iyo jeer la raraa riixaya furahan.
Xullo Liisaska: badhan wuxuu xaqiijinayaa xulashadaada. Ficil ahaan, waxaad ka hubineysaa lambarka liiska 1 illaa 12 (sidoo kale waxaad dooran kartaa in ka badan hal) ka dibna adigoo riixaya badhankan lambarrada roogga ayaa cagaar noqonaya (taas oo macnaheedu yahay inay iyagu yihiin kuwa sharad ku jira). Waqtigan xaadirka ah kaliya waa inaad gujisaa badhanka xaqiijinta Bet si dhab ah loo bartilmaameedsado xulashada.
Liisaska Tafatirka: haddii aad rabto inaad wax ka beddesho hal ama in ka badan oo nambarro ah si aad uhesho, waa inaad iska hubisaa lambarka liiska 1 illaa 12 aad xiiseyneyso oo riix batoonkan. Liisku wuxuu ku furmayaa Windows Notepad-ka caadiga ah waadna u tafatiri kartaa sida aad rabto. Ka dib markaad sameyso isbeddelada lagama maarmaanka ah, xir feylka adoo jawaabaya Si Codsiga keydinta ee bixitaanka. Xusuusnow ka dib isbadal kasta oo liistada ka dib waa inaad gabi ahaanba riixdaa badhanka Liisaska Reload si loo cusbooneysiiyo liisaska.
Liiska Diiwaanka: furehan wuxuu furaa galka barnaamijka kaas oo ka kooban dhamaan 12ka liis ee qaab feyl qoraal ah. Faylasha dhammaantood waa loo tafatiri karaa sida ka kooban, laakiin gabi ahaanba lama bedelo. Faylka waxaad ku arkeysaa dhammaan 12-ka feylood, ka dib waad u tafatiri kartaa sida aad rabto iyo, markii la xiro oo la keydiyo, furaha waa in mar walba la riixaa Liisaska Reload si loo cusbooneysiiyo liisaska barnaamijka.
Sidoo kale qaabka 'Free Bet Mode' waa suurtagal in la isticmaalo NumPad sida ku jirta Qaabka Bet-ka ee Qaabka, laakiin xaaladdan marka la xuso badhasaabku si toos ah far ugama tilmaamayo lambarka, laakiin kaliya ayaa dooranaya, sida haddii aad gujineyso lambarrada roogga barnaamijka markii ay cagaar noqdaan, runtiina markii xulashadu dhammaato , si aad sharad dhab ah tirooyinkan wali u leedahay inaad gujiso badhanka Bet, haddii loo baahdo, waxaa loogu beddeli karaa si loogu sahlo furaha booska ee kumbuyuutarka haddii xulashada qaraabada la hubiyey Khamaarka SpaceBar.
Soo Degso Fayl	RTClicker.zip - 2 MB
4894 XNUMX Soo degsasho